စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ရင်းနှီးစိုက်ထုတ်သုံးစွဲကုန်ကျစရိတ် အခြေအနေ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ရင်းနှီးစိုက်ထုတ်သုံးစွဲကုန်ကျစရိတ် အခြေအနေ (Capex)ဒေတာသည် သြစတေးလျှ ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည့်အတွက် သြဇီဒေါ်လာကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်လိုသူ traderများအနေနှင့် ထိုဒေတာကို ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်. Capexဒေတာကိုစောင့်ကြည့်ပြီး Audကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်လိုက်ပါ.
ယခုထုတ်ပြန်မည့်ဒေတာက ငွေကြေးအတွဲအပေါ် သက်ရောက်မှုပြင်းမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် သြဂုတ်လ ၃၁ရက် ၀၄:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်မည့် Capexဒေတာကို စောင့်ကြည့်ပြီး AUD/USDနှင့် သြဇီဒေါ်လာနှင့်တွဲနေသော အခြားငွေကြေးအတွဲများကို ရောင်းဝယ်ရန်အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်!
နှစ်တစ်နှစ်၏ အစသည် စတင်ခြင်းအသစ်များနှင့် ပို၍စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အပိုဆုရွေးချယ်ခွင့်များအတွက် အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
"Apple ထုတ်ကုန်များစွာ": ထင်ရှားကျော်ကြားသော ပရိုမိုးရှင်း၏ ခေတ်သစ်
FBS "Apple ထုတ်ကုန်များစွာ" ပရိုမိုးရှင်းသည် ၂၀၁၄ထဲက စတင်ခဲ့ပြီး၊ အချိန်နှင့်အမျှ ပိုကောင်းလာသည့်အရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၁ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်မှ မာတင်လူသာကင်း ဂျူနီယာ၏ အမွေအနှစ်ကို ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ထိုနေ့အား "အပိတ်နေ့ မလုပ်ဘဲ၊ အဖွင့်နေ့"